Rita, Writing for My Sake!: When I got in Yangon...
Posted by Rita at 3/29/2009 01:16:00 PM
စာအုပ်တွေ အများကြီးပဲ.. ပေးဖတ်ပါလား....
ကြောင်လေးကို ဘယ်လောက်တောင် နှိပ်စက်ထားလဲမသိဘူး ။ လှည့်တောင် မကြည့်ဘူး။ ဟီး ဟီး
သေချာဖတ်သွားတယ။် RIT ကတော့ရေးတေးတေးဘဲ။
ခင်ခင်ထူး က ၀ယ်လာတဲ့ထဲမှာတော့ ပါမယ်ထင်တယ် အဲ ကြည့်လိုက်တော့ မဟုတ်
အညာသူအညာသား ကျမ ဆွေမျိုးများတဲ့
နောက်ကြုံ မှ စာအကြောင်းဆွေးနွေးကြတာပေါ့
ဂျူးစာဖတ် အဖွဲ့လေး တကယ်လုပ်ချင်တယ်
အေးချမ်းငြိမ်သက်စွာနဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ယူနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်.
မမ ရေ .. အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ..
အဆင်ပြေပါစေxxxကြယ်တယ်ပြောကြမယ် ကျတော်လဲ ပြန်ရောက်တော့ အိမ်ပြန် ကားလမ်းမှာ ဆီနံ အိပ်ဇောနံ ဖုန်နံတွေနဲ့ နှာခေါင်းက ယားကျိယားကျိနဲ့၊ နောက် မနက်စာ စားဖို ကောင်းမှာထိုင်တော့ ရေနွေး ပန်ကန်က အစ ထိုင်ခုံအဆုံး ဖုန်တွေ နဲ့ စိတ်ထဲနဲနဲ မသန့်လိုက်တာ.
စာအုပ်တွေ အများကြီး ပါလာတာပဲ ကျတော်က ကီလိုတွေပိုနေလို့ တစ်အုပ်ပဲပါလာတယ် ရွှေ ၆၂၊ ကျန်ခဲတာတွေက ဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ ရဲ့ ၁၂ ပွဲဈေးသည် နောက် ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ တစ်နေ့တလံ ... ၊ စာအုပ်တွေလဲဖတ်မယ်လေဗျာ...ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင် ကျတော့အမေ့စာအုပ်က ဝယ်မလိုလုပ်ပြီးမှ မဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာဗျ။...မမ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ပုလုကွေးလေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်....
RIT ကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ YTU ဘ၀ ရောက်သွားတဲ့ အထဲကပေ့ါ။ ဗရုတ်ကျတာကတော့ ကျောင်းရဲ့ အစဉ်အလာ တစ်ခုအလား ကျွန်တော်တို့လည်း ဆက်ထိန်းထားပါတယ်။
လမ်းမှာတွေ့ရင် ရှောင်ပါ။ အဟား...
"ဆရာကြီး လေဖြတ်ထားလို့ လက်ရေးလေးတွေက ကလေး လက်ရေးလေးတွေလိုပဲ။" ကို မြင်ရဖတ်ရတော့ မမြဲခြင်းကို သတိရမိစေပြန်ပါတယ်။
Dr. ခင်မောင်ဝင်း (အသည်း) ရဲ့ "အမေနဲ့ ကျွန်တော်" ဖတ်ပြီးပါပြီ
၀င်းထွဋ်ဇော် ဘာသာပြန်တဲ့ "ပါဝါ ကျဆုံးခြင်းနှင့် စင်ကာပူ ဘ၀ရနံ့ ၀တ္ထုတိုများ" (One Singapore by Goh Sin Tub) မဖတ်ရသေးပါ။
ရန်ကုန်ရဲ့အငွေ့အသက်ကိုလွမ်းနေတယ်။ အဲဒါတွေ ကြုံရမယ်ဆိုတာကိုတွေးရင်းနဲ့ကို လွမ်းနေတာ။ :P
စာအုပ်တွေ ကြုံရင် လဲဖတ်ကြတာပေါ့